October 20, 2011 at 4:30 pm 1 comment
Beauty မဂ္ဂဇင်းပါ စာရေးသူ၏ အခန်းဆက် ၀တ္ထုရှည်ကြီးကို စုစည်းထုတ်ဝေထားခြင်းဖြစ်သည်။ စာပေဟောပြောပွဲခရီးခု၌ စာရေးသူသည် မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့၌ မိန်းမသားတစ်ဦးတည်းနေသည်ဆိုသော အိမ်တစ်အိမ်၌ တည်းခိုခဲ့ရာမှ ထိုအိမ်ရှင်အမျိုးသမီး၏ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဂမ္ဘီရဆန်ဆန် နောက်ကြောင်းဇာတ်လမ်းကို သိရှိခဲ့ရသည်။ ရန်ကုန်ရောက်သောအခါ ထိုအိမ်ရှင်မိန်းမသား ပြောပြသော ဘ၀ဇာတ်လမ်းကို ချဲ့ထွင်၊ မြန်မာ့သစ်တောသမိုင်းစာအုပ်များမှ အချက်အလက်များကို ရယူ၊ ခင်ကြီးဖျော်၏ “ကဝေသာရ”ကျမ်းအစရှိသည့် ရှေးဟောင်းပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်များမှ အချက်အလက်များကို အလျဉ်းသင့်သလို ထည့်သွင်းကာ ယခုဝတ္ထုရှည်ကြီးကို ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ (from Myanmar Book Shop website)
ကိုယ်ကလဲ အဲဒီလို ဂမ္ဘီရဆန်ဆန် ကိစ္စမျိုးတွေကို လုံးဝယုံကြည်လှတယ်မဟုတ်တောင် မယုံဖူးရယ်တော့လည်း မပြောတဲ့သူတဲ့ထဲမှာပါသူ၊ တခါတလေမှာ လျှိ့ဝှက်သဲဖိုဝတ္တုတွေဖတ်ရတာ၊ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတာကိုသဘောကျသူဆိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကိုသဘောကျတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လုံးဝမယုံကြည်တတ်သူအဖို့တော့ အလကားဟာတွေလျှောက်ရေးထားတယ်လို့လဲ ထင်ကောင်းထင်မှာပေါ့။ စဖတ်လိုက်ထဲက ဇာတ်လမ်းထဲမျောသွားတာ စိတ်ထဲမှာ မွန်းမွန်းကျပ်ကျပ်ဖြစ်လာလိုက်၊ အသက်ရှုတောင်မ၀တော့ဖူးလို့ ဖြစ်လိုက်၊ စိုးရိမ်လိုက်နဲ့ ရသအဖုံဖုံခံစားပြီး ဇာတ်သိမ်းကျတော့လဲ ဇာတ်ကောင်အမျိုးသမီး စုံစမ်းနေတဲ့ကိစ္စဟာ ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာပဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကို အစထဲက နည်းနည်းရိပ်မိနေပေမယ့် မထင်မှတ်တဲ့ ကိစ္စတခုနဲ့ စာဖတ်သူကိုအံ့အားသင့်သွားအောင်လဲ ဖမ်းစားလိုက်နိုင်သေးတယ်။ အရင် ဆူးပန်းခွေ စာအုပ်တုန်းကတော့ ဇာတ်ဆောင်အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး ကိုဇတ်ပေါင်းပေးလိုက်တာတောင် စိတ်ထဲမှာ မကျေမနပ်ကြီး။ သူက သူ့ဇာတ်ကောင်မိန်းကလေးကို အလုပ်တွေပဲလုပ်နေပီး အိမ်ထောင်မပြုချင်သူပါလို့ ခါးခါးသီးသီးဖြစ်ခိုင်းထားပြီးမှ ဘတ်ကနဲ ပေးစားလိုက်သလိုဖြစ်နေတာကိုး။ ဒီ စာအုပ်မှာတော့ ဇတ်ပေါင်းပေးလိုက်တာလေးကလဲ ကျေနပ်စ၇ာ။ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်နေတုန်းမှာ၊ဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ သဘောတကျဖြစ်ရတဲ့အရသာက ဘာနဲ့ မှ မလဲနိုင်ဖူး။
ယုံချင်သူတွေလဲယုံ၊မယုံကြည်လဲနေလို့ ရတဲ့ သစ်တောကြီးထဲက သစ်တောဝန်ထမ်းတွေကြုံရဆုံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေကလဲ စိတ်ဝင်စားဖို့အတော်ကောင်းတယ်။ အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးရဲ့ စရိုက်ကိုသရုပ်ဖော်တာလဲ အတော်ကိုပီပြင်တော့ ဖတ်နေရင်း ကိုယ့်ေ၇ှ့ ငုတ်တုတ်များရောက်နေမလား တောင်ကြောက်မိသေး။ တခြားဇာတ်ကောင်တွေလဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင် သရုပ်ဖော်နိုင်တော့ အကုန်လုံး သဘာဝကျကျ အသက်ဝင်နေသလိုပဲ။
ဆက်ရေးရင်တော့ စာအုပ်ကြေငြာပဲ ဖြစ်တော့မယ် :D။ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းများကို စိတ်ဝင်စားတတ်သူတွေအဖို့ တော့ ဒီစာအုပ်က ဖတ်လို့ ကောင်းမယ့် ရသအပြည့်ပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ပါပဲလို့ အကြိုက်တူမယ့်သူတွေကို လက်တို့တာပါ။
Entry filed under: ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်း, Sharing.
မြသန်းတင့်-ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး (၃၃)	သူလိုမိန်းမများ
1. Ae'Ae' | October 17, 2012 at 12:12 am
အမပြောတာနဲ. ဖတ်တောင်ဖတ်ချင်လာပီ 😀